War - Waa maxay Sababta Dhalinta Mashiinka Mashiinka?
Waa maxay buuqa waalka?
Ka dib marka gaariga la bilaabo, matoorku wuxuu sameeyaa "garaac" laxan ah oo la mid ah dhawaqa garaaca birta, kaasoo si dhaqso leh u xawaareynaya markii xawaaraha matoorku kordho. Xaaladaha caadiga ah, mishiinku ma sameyn doono buuqa noocan ah muddo dheer. Buuqyada badankood waxaa la sameeyaa mudo gaaban kadib qabow bilaabmay ka dibna si tartiib ah ayey u baaba'aan. Kani waa buuqa waalka.
Waa maxay sababta dhawaaqa waalka?
Sababta ugu weyn ee loo garaacayo waalka waa nadiifinta laga dhex abuuray waalka matoorka farsamooyinka, kuwaas oo intooda badani ay sabab u yihiin qaybo ka mid ah duugista ama hagaajinta cillad la'aanta, sida camshafts, gacmaha dhagxaanta, iyo jaakadaha hiddaha.
Inta badan matoorada hadda waxay adeegsadaan jajabka loo yaqaan 'hydraulic jacks', kuwaas oo inta badan loo isticmaalo in si toos ah loogu hagaajiyo farqiga ay keeneen xirashada qalabka waalka. Isku hagaajinta otomaatiga ah ee jeexjeexayaasha hidaha waxaa lagu gartaa cadaadiska saliidda. Marka qaybaha si xad-dhaaf ah loo xirto oo ay ka sarreeyaan xadka hagaajinta otomaatigga ah, buuq ayaa dhacaya. Cilad-darrada khaanadda hidda-hawo-galinta iyo cillad-darrada ku-shaqeynta otomaatiga ah ee tooska ah waxay sidoo kale sababi kartaa waalka inuu dhawaaqo.
Ka saarida waalka xad dhaafka ah, marka lagu daro buuqa marka aad bilaabaneyso (waa iska cadahay markuu gaariga qabow yahay), waxaa jira cillado kale. Sida: wiishka oo aan ku filnayn, qaadashada oo aan ku filnayn, qiiqa aan dhammaystirnayn, tamarta mishiinka oo yaraaday, iyo isticmaalka shidaalka oo sarreeya.
Maaddaama nooc kasta oo gaari ka duwan yahay, shuruudaha nadiifinta waalka sidoo kale way ka duwan yihiin. Guud ahaan, nadiifinta caadiga ah ee wiishka qaadashadu wuxuu u dhexeeyaa 15-20 fiilooyin, nadiifinta caadiga ee waalka qiiqu wuxuu u dhexeeyaa 25-35 fiilooyin.
Waa maxay xiriirka ka dhexeeya buuqa waalka iyo saliidda mashiinka?
Maaddaama hawsha hagaajinta nadiifinta otomaatigga ah ee hidaha hidda-hidda ay ku cadaato cadaadiska saliidda, dhawaaqa waalka wuxuu xiriir toos ah la leeyahay saliidda. Dabcan, hordhaca ayaa ah in mishiinka uusan xirneyn.
1. Cadaadis saliid oo hooseeya ama mugga saliida oo aan ku filnayn
Cadaadiska saliida oo hooseeya, saliid aan ku filneyn qolka waalka; ama saliid aan ku filnayn, iyo daloolada jajabka hawo-qaadashada marka hawadu gasho marinka saliida, waxay sababi doontaa buuq.
2. Hawada ayaa soo marta marinka saliida inta lagu jiro dayactirka
Dad badan ayaa khibrad noocan ah leh. Waxay dhammeeyeen dayactirka, waxaana jiray dhawaq muddo-gaaban ah oo waaberi markii dabku dhacayay maalinta xigta. Xaqiiqdii, xaaladani waa mid iska caadi ah, maxaa yeelay inta lagu guda jiro soo saarista saliida marinka saliida, saliida marinka saliida waa faaruqdaa, hawaduna waxay soo gali kartaa marinka saliida waxayna sababi kartaa buuq. Muddo hawlgalka kadib, hawadu waa soo bixi doontaa oo sanqadha waalka ayaa baabi'i doonta.
3. Kaarboon badan oo dhigata mishiinka
Mashiinka markii la isticmaalo muddo ka dib, kaydinta kaarboon ayaa ka dhex dhici doonta gudaha. Marka kaydadka kaarboonku ku ururaan illaa heer gaar ah, marinnada saliidda waa la xannibi karaa, taasoo keeneysa in si otomaatig ah shaqada isku hagaajinta farqiga ee hawo-haweedka uu ku guuldareysto uuna keeno buuqa waalka
Sidee looga fogaadaa buuqa waalka?
Ka fogaanshaha wicitaanka waalka dhab ahaantii waa mid aad u fudud. Milkiilaha gaariga wuxuu kaliya ubaahan yahay inuu ilaaliyo waqtiga loogu talagalay si waafaqsan shuruudaha soo saaraha si looga hortago xirashada mashiinka, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta dhacdada xaaladdan. Waxa kale oo aad muhiim u ah in la doorto saliida mishiinka ee ku haboon darajada mishiinka iyo sunta gaadhigaaga, hana si indho la’aan ah u daba fadhiisan saliidaha injiinka heerkiisu hooseeyo iyo kan hooseeya.